Hopitalibe Toamasina : Hahazo 9 400 000 Ar avy amin’ny fikambanana Tafaray -
AccueilSongandinaHopitalibe Toamasina : Hahazo 9 400 000 Ar avy amin’ny fikambanana Tafaray
Nikatona tanteraka iny ny andiany voalohany tamin’ny “Festival Tamaga Midôla”. Hetsika ara-panatanjahantena fanao amina tora-pasika nokarakarain’ny fikambanana Tafaray tany Toamasina, ny 30 septambra hatramin’ny 7 oktobra teo.
Raha ny nambaran’ny mpikarakara teo anivon’ny fikambanana Tafaray, dia hatolotra manontolo hoenti-manampy ny Hopitaliben’i Toamasina, ny vola azo sy voaangona rehetra nandritra ny fifaninanana tamin’iny “Festival Tamaga Midôla” iny. Araka izany, nambaran’ny kolonely Nicolas Jean Patrick, mpikambana eo anivon’ny fikambanana, fa nahatratra 9 400 000 Ar ny vola azon’izy ireo tamin’iny hetsika iny.
Nambaran’ny filohan’ny fikambanana Tafaray, Mbola Rajaonah mivady, tamin’izany fa hatolotra manontolo ny Hopitaliben’i Toamasina izany. Izany hoe, raha ny fanazavana ihany, hividianana fitaovana hanampiana ny hopitaly sy ireo marary manaraka fitsaboana ao izany. Voalaza fa any amin’ny sampam-pitsaboana mikasika ny aretin-tsaina sy ny aretin-tratra no hanomezan’izy ireo izany fanampiana izany.
Mbola tsy fantatra mazava kosa aloha, hatreto, ny mahakasika ireo fitaovana hatolotra azo avy amin’io vola io, fa raha tsiahivina mantsy dia efa nanolotra ordinatera 25 sy “imprimante” iray ho fanampiana ny lycée-n’i Manakara izy ireo tamin’ny alalan’ny hetsika “Tournoi de Pangalane”. Nitohy izany asa soa ataon’ny fikambanana Tafaray izany tamin’ny alalan’ny fanomezana ordinatera miisa 35 sy “imprimante” roa ho an’ny lycée-n’i Mahajanga tamin’ny alalan’ny “Moudjangaya Mi’chimé”, ary kidoro miisa 150 kosa ho an’ny hopitalin’i Nosy-Be tamin’ny alalan’ny hetsika “Festival Sômarôho” farany teo.
Nambaran’ny filohan’ny fikambanana Tafaray, Mbola Rajaonah, tamin’ny lanonam-panakatonana ny “Festival Tamaga Midôla”, fa tsy natao hahazoana tambiny velively akory ny fanampiana ny mpiara-belona.
Notsindriany ihany koa ny fampiraisana ny samy Malagasy, amin’ny alalan’ny fifaninanana ara-panatanjahantena, izay karakarain’ny fikambanana. “Hihitatra ary hitarintsika amina toerana maro manerana ny Nosy ny hetsika toa izao ataontsika izao, mba ahafahantsika manampy ny mpiray tanindrazana sy ny mpiara-belona amintsika. Tsy natao hahazoana tambiny kosa anefa izany, fa natao am-pitiavana madio. Ny hetsika tahaka izao ihany koa no ahafahantsika mampifandray ny samy malagasy, indrindra fa ny tanora mba hirona misimisy kokoa amin’ny fanatanjahantena…”, hoy ny filohan’ny fikambanana nanamafy.
Nomarihin’i Mbola Rajaonah hatrany fa tsy misy ambadika politika velively, araka ny voizin’ny maro ny hetsika karakarain’ny fikambanana Tafaray.
Hiditra amin’ny andiany faharoa sahady ihany koa mantsy ny “Tournoi Allée des Baobabs”, izay tafiditra amin’ireo hetsika ara-panatanjahantena karakarain’ny fikambanana Tafaray, ny 10 – 18 novambra izao, any Morondava.
Tetsy amin’ny minisiteran’ny Atitany no nanamarihana ny fanombohana ny androm-pirenena ho an’ny fanadiovana, ka nanome voninahitra izany ireo mpikambana anaty governemanta. Nitarika an’izany kosa ny praiminisitra lehiben’ny Governemanta Olivier Solonandrasana. Taorian’izay dia samy nanatontosa ny ...Tohiny